Anyị na-enye nnukwu ụlọ ọrụ batrị dị elu ahịa 5000mah 3.7v li-ion 21700 batrị batrị dị elu na ọnụahịa ụlọ ọrụ.Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd bụ ụlọ ọrụ batrị lithium na-ewepụta maka ụdị batrị niile dị ka 21700, 18650, 14500, 123A, 103450 , AA, AAA na ndị ọzọ. Ngwaahịa anyị kachasị gụnyere batrị Lithium, Ike ụgbọala, ikike nchekwa teknụzụ ụgbọ eletriki igwe eletriki na batrị ike, dabara adaba maka ọkụ eletriki ekwentị, ụgbọ ala, nche. ego, ike nkwado na mpaghara ndị ọzọ.
Anyị na-enye ezigbo ihe dị elu Deep Cycle LiFePO4 800mAh 3.2V /3.7V Njiji batrị IFR 14500 batrị eji, ọkụ ọkụ Street, mkpọ batrị, ihe egwuregwu ọkụ eletrik, ngwa ụlọ, nchekwa fotovoltaics, ọkụ ọkụ, ọkụ anyanwụ, igwe POS na ngwa ndị ọzọ dabara adaba. .14500 akụkụ batrị batrị dị elu na ezigbo ikike, kwe nkwa na ị gaghị eji akụrụngwa dị ala. Anyị na-enye ndị ahịa batrị dị elu 14500 dị elu ma nyere ndị ahịa aka ịnapụta ha batrị site na China site n'oké osimiri na ikuku site na ezi uche. ọnụahịa. Na anyị na-enye ndị dị mkpa oru nkwado na akwụkwọ ikike gị!
Anyị na-enye ogo dị elu nke 3.2v Nhọrọ Voltage 10ah Nkọwa Ike Isi 38120 10ah 3.2v lifepo4 sel batrị ụgbọ ala ejiri na ọkụ ọkụ, ọkụ Street, mkpọ batrị, nchekwa ọkụ, ọkụ eletrik, Egwuregwu ezé eletriki, batrị Mouse, Flashlight na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. 381120 sel ndị nwere akụkụ batrị dị elu nwere ezigbo ikike, kwere nkwa ka ha ghara iji ihe ndị dị ala. Anyị na-enye ndị ahịa niile batrị dị elu 38120 dị elu ma nyere ndị ahịa aka ịnapụta batrị site na China na ha site n'oké osimiri na ikuku na ọnụ ahịa ezi uche. Na anyị na-enye ndị dị mkpa oru nkwado na akwụkwọ ikike gị!
Ihe Edere Ihe: Ihe batrị gbara ọkpụrụkpụ 1.2V 2000mah batrị maka Ngwa Ngwongwo Igwe elekere nke PLM-1.2V Ngwa: Obere ụgbọ ala, ihe egwuregwu eletriki, ngwugwu batrị, nchekwa anyanwụ, Cargbọ ala eletriki, ezé ezé, batrị ọkụ, igwe ọkụ, njikwa ọkụ wdg. Nkwa ohuru 1） Mmepụta Nleta 2） Nlere Ọkachamara 3） N'ahịa Ngwá Ọrụ 4） OEM / ODM Nabata Ihe Ntinye ọkwa, arụmọrụ kwụsiri ike, ezigbo ikike, enweghị nchekwa ma nwekwa ike nkwụgharịgharị. 2. Ngwaahịa Param ...